Imibhalo nge UJenn Lisak Golding
Leyo nkinga yebhizinisi noma umgomo wokusebenza ocindezela wena muva nje? Amathuba izixhumanisi zawo zesixazululo kubuchwepheshe. Njengoba izidingo zesikhathi sakho, isabelomali kanye nobudlelwano bebhizinisi zikhuphuka, okuwukuphela kwithuba lakho lokuhlala uphambili kwabaqhudelana ngaphandle kokulahlekelwa yingqondo yakho kungokuzenzakalela. Ushintsho ekuziphatheni komthengi ludinga i-automation Usuvele uyazi ukuthi i-automation ayiyona-brainer maqondana nokusebenza kahle: amaphutha ambalwa, izindleko, ukubambezeleka, nemisebenzi yezandla. Okubaluleke kakhulu, yilokho amakhasimende akulindele manje.
NgoMgqibelo, ngoMeyi 16, 2020 NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 UJenn Lisak Golding
Njengoba amabhulogi amaningi namawebhusayithi eshicilelwa nsuku zonke, okukhathazeka kakhulu ukuntshontshwa kwezithombe ozithengile noma ozenzele ukuzisebenzisela wena noma umsebenzi wakho. I-TinEye, injini yokusesha ebheka emuva, inika abasebenzisi ikhono lokusesha i-url ethile yezithombe, lapho ungabona khona ukuthi izithombe zitholakale kangaki kuwebhu nokuthi zisetshenziswe kuphi. Uma uthenge isithombe sesitoko emithonjeni efana neyethu
Umhlahlandlela Wokumaketha We-imeyili Wokugcina we-Holographic Infographic
NgoLwesithathu, uDisemba 7, 2016 NgoLwesine, Septhemba 24, 2020 UJenn Lisak Golding
'Lesi yisikhathi sokumaketha kwamaholide, futhi umxhasi wethu wesoftware yokuqinisekisa i-imeyili uNeverBounce udale umhlahlandlela wokumaketha we-imeyili wokugcina wenjabulo yakho yokubuka. Imininingwane yeNational Retail Federation iyaqhubeka nokukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwemali kuyenyuka kulo nyaka, ikakhulukazi ku-inthanethi futhi kuqhutshwa yimizamo yedijithali. Ukumaketha nge-imeyili ikakhulukazi kudlala indima enkulu, futhi abathengisi badinga ukuhlala ngaphezulu kokugcina uhlu lwabo luhlanzekile futhi lusha ukuvikela idumela labo abathumelayo nokulethwa kwabo. Abanye
Impendulo emfushane? Yebo. Okungenani ngomqondo wendabuko, nangokuthi “ngokwendabuko” sisho ukufuna imininingwane yezivakashi ngaphambi kokuthi unikeze inani, noma ukusebenzisa okuqukethwe okudala, okumile njengesikhuthazo. Masilondoloze lelo loli ngesizinda esithile: Emsebenzini wethu sisiza amaklayenti akhulise ukuguqulwa kwawo ku-inthanethi, siqaphele ukwehla okukhulu, okungaguquki kubavakashi bewebhu abagcwalisa amafomu wokuhola wendabuko. Kunesizathu esihle salokho. Ukuziphatha komthengi kuyashintsha, ikakhulukazi ngoba ubuchwepheshe, ulwazi